Isinxibo seYoga yabasetyhini |
Iingubo zokwakha iimpahla ezinokuPhefumlwa ezomeleleyo ezinokuchasana ne-Anti-Static Women
I-85% yePolyester kunye ne-15% ye-Spandex, nceda ukhethe i-hotexy_retailer ngaphambi kokufaka kwinqwelo, abanye abathengisi ngabathengisi bobuxoki.
Iimbonakalo:Iinaliti ezine kunye neLines Lines zokuthunga zibonelela ngenkxaso ephezulu ukusuka ekuqaleni ukuya esiphelweni.
Izinto:Igolide yegolide eyenziwe ngokwezifiso ze-fabiric yenza izinto ezinobunzima be-ultra-lightweight & wick kude umswakama kunye nokuphucula ukuhamba komoya.
Imilinganiselo yoMzekelo:Gqoka i-S, (ibhlukhwe) ubude: 34.6inch, esinqeni: 24.4inch, Hip: 29.1inch; (Phezulu) Bust: 29.5inch, Waist: 25.5inch.
Iiseti zomsebenzi zilungele iyoga, ukubaleka, umthambo, umjikelo njalo njalo.
I-non-Slip Eco-Friendly Sexy Bra Isusa iiPads zoomama ukuzilolonga iLegi Wear
Ukulungele ukubaleka, i-yoga, ukutsiba umthambo, izixhobo zemidlalo kunye nezinye iintlobo zoqeqesho lomzimba.
Ngokukhawuleza okomileyo okuThuthukileyo okuGqwesileyo kweYoga engasetwanga iimpahla zabasetyhini
Umsebenzi: Ukuma okomileyo, inkxaso ephezulu, akukho kubona ngaphaya
Ubungakanani: I-XXS-XXXL yamanye amazwe, i-US 2-14, i-EU 32-46, i-AU 4-14
Ilogo: Ukuprinta kwescreen, ukuprinta kwesilicon, ukuhombisa, i-sublimate, ukuhambisa ubushushu, njl.
I-Yoga Suit 2 Piece Ihempe eziMdaka zemidlalo Crop ephezulu yeLeggings Gym Iimpahla
Iiseti zeyoga ezingenamthungo kubafazi zikwenza ubonakale unciphile. I-leggings esinqeni esiphakamileyo esineebhande ezinqeni ezinqeni inikezela ngenkxaso enkulu kwaye yonyusa ubume bakho, ikusondeza ngokufanelekileyo. Iziqwenga ezinomtsalane kunye nesitayile ezenza le suti yezemidlalo ibe nomtsalane ngakumbi, i-flirt kunye ne-chic.
Iziqwenga ezi-2 zokulandela iisuti, iimpahla ezisebenzayo ze-aerobics kunye nokuzivocavoca umzimba
Ithuba: umthambo, ukuphuma ngaphandle, ukubaleka, i-yoga, amanqindi, imidlalo yeembaleki
Abafazi abaQinisekayo abaPhezulu boXinzelelo loQeqesho kwiMidlalo yeLeggings ebalekayo yeGym Fitness Yoga ibhlukhwe
UKUPHEFUMLAZA NOKUPHEPHA: Le micimbi yezemidlalo ibonelela ngokuphefumla okukhulu, xa kumanzi, banokukhawuleza ukufeketha ukufuma kude nolusu, kukugcine usomile ngalo lonke ixesha. Ngaphandle koko, izinto zithambile ngokuthamba ngaphandle, phantse xa kuthelekiswa noboya begusha obugudileyo. Ingena njenge glavu kodwa ayinyanzeleki kwaphela！Ilungele i-yoga, ukufaneleka, ukubaleka, umdaniso weZumba, indlu kunye namanye amatheko.
Ngokukhawuleza umbala owomileyo woLusu lwabafazi oSebenzayo uQeqeshiso lweeMpahla zeYoga
Iiseti zokunxiba zilungele i-yoga, ukubaleka, umthambo, umjikelo njalo njalo.
Imfashini eSunction Ukufuma-Ukujija kwabasetyhini iGym Iimpahla zeBowknot Sport Yoga Set
Ukungaboni, ukujija ukufuma, ukuphefumla kunye nelaphu eloluliweyo libonelela ngogqibo olupheleleyo
Yolula iNylon Ilaphu-ilungile kwiyoga, umthambo, ukomelela, naluphi na uhlobo lokuzilolonga, okanye ukusetyenziswa kwemihla ngemihla
Intuthuzelo kunye nokunxiba -Umlenze weYoga ukwabonisa ngaphezulu kwayo yonke imiqolo yokudibanisa ukunciphisa ukucaphuka
kunye nokuphelisa ukothuka, ivumela intuthuzelo kunye nokudinwa
Ukuzivocavoca / ukulungela ubungakanani boBungakanani boBuchule obuLulekileyo beLegg Women Women Wear
Intuthuzelo kunye nokunxiba -I-legging ye-Yoga ikwakhona kuyo yonke indawo enqamlezileyo ukunciphisa ukucaphuka kunye nokuphelisa ukothuka, ivumela intuthuzelo ephezulu kunye nokunxiba
I-Gym ephefumlayo engenamthungo kwiLeggings ephezulu ye-Yoga isetelwe abaseTyhini
ISIQINISEKISO ESIPHAKAMILEYO KUNYE NOLAWULO LWENYAMAXa kuthelekiswa nemodeli ka-2019, i-capris entsha ye-yoga yamabhinqa yenzelwe ngesinqe esiphakamileyo esinqeni solawulo olungcono lwesisu, inika yonke inkxaso kunye noxinzelelo kwisisu sakho kunye neempundu ukubuyela kwimo yaso yoqobo. Yithi sala kwi-muffin ephezulu kwaye ube ngcono kuwe.
Unokuphefumla ngokuLungelayo ukunxiba amaLadies eGym Yoga Suitwear
IZINTO: 60% yenylon + 35% ipholiyesta + 5% spandex, ilaphu lokomisa ngokukhawuleza; I-elastic ephezulu, ulusu olunobuhlobo, ubukhulu obuphakathi, ukufotwa kokufuma kunye nokoma ngokukhawuleza. Izinto ezi-4 zokuzolula ukukhuthaza ukuthamba kunye noxinzelelo.
Ilaphu eloluliweyo lokuGubungela okungagqibelelanga okungasetyenziswanga kwabasetyhini beMidlalo yeYoga
【Izinto kunye nobungakanani】 nylon + ipholiyesta + ubungakanani be-spandex: i-US esemgangathweni, iileggings ezingenamthungo zibaleka ziyinyani. Nangona kunjalo, ukuba uphakathi, sicebisa ukuba unyuke ubungakanani.
Technology Itekhnoloji engenamthungo comfortable Yonwabe ngakumbi kwaye ayibonwa nge-Ultra-Stretch Fit (Ubungakanani oboneleyo bokuphefumla).
Gg Amanqwanqwa aphezulu okuLolongwa okuLolwayo ature Fakela ilaphu lethu elisemgangathweni ophezulu elolula amagophe akho kunye nokuhlengahlengisa ubume bendalo besinqe sakho. Ngokuphakama okubanzi, ukuphakama kwebhanti kunye nokulawula isisu, ezi leggings ze-yoga zilungele abafazi abasebenzayo.
Ubungqina besquat】 I-Toplook engenamthungo yeYoga iblukhwe yesiQinisekiso, ukuphakamisa i-Butt, ukulungele umthambo, i-yoga, ukuzilolonga, ukulunga, naluphi na uhlobo lokuzilolonga, okanye ukusetyenziswa kwemihla ngemihla.